Falanqeynta Kulanka Manchester City Vs Birmingham City Ee FA Cupka Wareegiisa 3-aad
HomeHoryaalada KaleFalanqeynta Kulanka Manchester City Vs Birmingham City ee FA Cupka Wareegiisa 3-aad
January 10, 2021 Horyaalada Kale, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda Manchester City oo ku jirta heerka ugu wanaagsanaa kubadeeda marka la eego kulamadii ugu danbeeyay ayaa Garoonkeeda Etihad Stadium waxay ku soo dhaweyndoontaa kooxda Birmingham City kulan ka tisan Kooba FA Cupka wareegiisa sadexaad.
Sergio Aguero ayaa qarka u saaran inuu sameeyo kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Manchester City tan iyo bishii Oktoobar kulan ka tirsan wareega seddexaad ee FA Cup oo ay la ciyaarayaan Championship Birmingham City ka dib markii uu kasoo kabsaday dhibaato jilibka ah.
Gabriel Jesus iyo Kyle Walker ayaa laga yaabaa inay ciyaaraan ka dib markii ay ka soo kabteen Covid, laakiin waxaa laga yaabaa inay dhaqso u tahay Ederson.
Kulanka Manchester City vs Birmingham City
Daafacyada Birmingham Marc Roberts (canqowga) iyo Kristian Pedersen (jilibka) ayaa ciyaari kara ka dib markii ay ku soo laabteen tababarka.
Weeraryahan Caolan Boyd-Munce iyo goolhaye Zach Jeacock ayaa labaduba wali dhaawacan.
Kulankan waa kii ugu horeeyay ee FA Cup-ka ee dhexmara Man City iyo Birmingham tan iyo kulankii wareega sadexaad ee Janaayo 2001, Man City ayaa 3-2 ku badisay Maine Road.
Birmingham ayaan wax guul ah gaarin 12-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay marti u ahayd kooxda Man City tartamada oo dhan (D2 L10), iyada oo ay tahay markii ugu horaysay ee ay booqato tan ilaa kulan League Cup ah bishii September sanadkii 2011 (0-2).
Man City ayaa markii ugu dambeysay ku guuldareysatay inay gaarto wareega afaraad ee FA Cup xilli ciyaareedkii 2011-12, iyadoo gurigeeda looga badiyay Man Utd xilligan oo kale. Citizens ayaa badisay shantii kulan ee ugu dambeysay wareega seddexaad wadar ahaan wadar ahaan 23-2.
Tan iyo markii ay Wolves 1-0 kaga badisay 2011-12, Birmingham ayaa laga reebay 7-dii kulan ee ugu dambeeyay ee FA Cup ee ay la ciyaartay kooxaha Premier League.